December 15, 2020 – Voice of Myanmar
ထီလက်မှတ်ကို အစိမ်းနုရောင် နဲ့ ပြောင်းထုတ်မယ်
ဒီဇင်ဘာ ၁၅-၂၀၂၀ ယဉ်ပပထွန်း (VOM) ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ နဲ့ မတ်လ အဲ့ဒီ ၃လမှာ ရောင်းချပေးမယ့် ထီလက်မှတ်တွေရဲ့ အောက်ခံအရောင်ကို အစိမ်းနုရောင်နဲ့ ပြောင်းလဲထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒီနေ့မှာပဲ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ “ကျွန်တော်တို့ကို ဝါဇီဘက်က ဒီလိုတွေ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေထားတယ်လို့ အကြောင်းကြားလာတာပါ ။ ဒါကြောင့် ဒီကံစမ်းတဲ့ပြည်သူတွေသိအောင်လို့ ကျွန်တော်တို့က ထုတ်ပြန်ပေးတာပါ။ တခြားဘာအကြောင်းအရာမှတော့မရှိပါဘူး ။ ဟိုဘက်ကနေထုတ်ပြန်တဲ့အတွက် ဒီလောက်ပဲ ပြောလို့ရတာပါ“လို့ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးညီညီလှှိုင်က ပြောပါတယ် ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ နဲ့ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ရောင်းချမယ့် ၂၄ ၊ ၂၅ ၊ ၂၆ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီစာအုပ်တွေရဲ့ လုံခြုံမှုအရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်ရန်…
၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ထောင်ချခံရတဲ့ သတင်းသမားအရေအတွက် စံချိန်တင်
နယူးယောက်၊ ဒီဇင်ဘာ-၂၀၂၀ မျိုးဆက် (VOM) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအပေါ် အစိုးရတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ လူထုအုံကြွမှုတွေမှာ သတင်းထောက်တွေရဲ့ သတင်းရယူတာတွေအပေါ် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ သတင်းထောက်အရေအတွက် စံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းသမားကာကွယ်ရေးကော်မတီက ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်မှာ ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့အထိ ထောင်ကျနေတဲ့ သတင်းသမားဦးရေဟာ ၂၇၄ ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီး ယမန်နှစ်က ၂၅၀ ဦးသာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအရေအတွက်ဟာ နယူးယောက်အခြေစိုက် ဂျာနယ်လစ်ကာကွယ်ရေးကော်မတီက ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းကာလတွေမှာ အချက်အလက်တွေစတင် ပြုစုကတည်းက စံချိန်တင်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းသမားတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်အများစုကတော့ ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီး တရုတ်၊ တူရကီ၊ အီဂျစ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျတို့မှာ ဖမ်းဆီးမှုတွေ အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလမှာလည်း အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သတင်းသမားတွေကို ဖမ်းဆီးခြင်းအားဖြင့် သတင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်ထဲမှ…
ဒီဇင်ဘာ ၁၅-၂၀၂၀ သိင်္ဂီထွန်း (VOM) ရန်ကုန်တိုင်းကနေ လေယာဉ်လိုက်ပါစီးနင်းမယ့် ခရီးသည်တွေကို ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ကစပြီး ကိုဗစ်ပိုးရှိ၊မရှိ ဓါတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးမှုကို နေရာနှစ်ခုမှာ လုပ်ဆောင်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိ Tourist Burma အဆောက်အဦး နဲ့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းက ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဌာနမှာ ကိုဗစ်ပိုးရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ “အမတို့ သားအမိက ဟဲဟိုးကိုသွားမှာ အလုပ်ကိစ္စပေါ့။ လက်မှတ်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့ ဆေးစစ်ဖို့ သွားနေတာပါ၊ ဆေးစစ်ခ ကုန်ကျစရိတ်က မိမိဘာသာကုန်ကျခံရတယ်လို့ သိရတယ်။ ဟိုရောက်ရင် Qဝင်ရမလား ၊မဝင်ရဘူးလားဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး။ hotel ကွာရန်တင်း ပဲနေရမလား တစ်ခုခုပေါ့”လို့ လေယာဉ်နဲ့ခရီးသွားမယ့် ဒေါ်သန္တာစိုးကပြောပါတယ်။ ကိုဗစ်ပိုးရှိမရှိ ဆေးစစ်မယ့်သူတွေကို ဝယ်ယူထားတဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်နှင့်အတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား (သို့မဟုတ် ) အခြားသက်သေခံအထောက်အထားနဲ့ (၆)လအတွင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ(၁)ပုံ ယူဆောင်လာမှသာ စစ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ခရီးစတင်မထွက်ခွာမီ…
သထုံမှာ သစ်သီးကားတိမ်းမှောက်ပြီး အခြားယာဉ်၂ စီးကိုဆင့်တိုက်၊တစ်ဦးသေဆုံး ၃ဦးဒဏ်ရာရ
ဒီဇင်ဘာ ၁၅-၂၀၂၀ ကောင်းလက်ျာ(VOM) မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ကျိုက္ကော်ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်လမ်းပေါ် မှာ မနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းက သစ်သီးတင်ကား တိမ်းမှောက်ပြီး အခြားယာဉ် ၂ စီးကို ဆင့်တိုက်ရာကနေ အမျိုးသား တစ်ဦး သေဆုံးကာ၊ လူ ၃ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ သထုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကနေ သိရပါတယ်။ ” ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ အခင်းဖြစ်နေရာမှာ သစ်သီးကားစပါယ်ယာသေဆုံးပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ၃ ဦးမှာ တစ်ဦး စိုးရိမ်ရတယ်”လို့ သထုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ ရန်ကုန်- မော်လမြိုင်ကားလမ်းအတိုင်း သထုံဘက်ကနေ ဘီးလင်းဘက်ကို အမျိုးသား ၃ဦး မောင်းနင်လိုက်ပါလာတဲ့ သစ်သီးတင် မစ်ဆူဘီရှီအမျိုးအစား (၆) ဘီးယာဉ်ဟာ အခင်းဖြစ်နေရာအရောက် အရှိန်လွန်တိမ်းမှောက်ပြီး တစ်ဘက်လမ်းကြောပေါ်ရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလာတဲ့…
ဝါရှင်တန်၊ ဒီဇင်ဘာ-၁၅-၂၀၂၀ မျိုးဆက်(VOM) အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ရဲ့ အနိုင်ရရှိမှုကို သမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပြီး ဒါဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်က ပြောပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ တွန်းအားပေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတွေခံခဲ့ရပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ စစ်မှန်ခြင်းနဲ့ခိုင်မာခြင်းတို့ကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ အနိုင်ရလဒ်ကို တရားဝင်ကြေညာပြီးနောက် ပြောကြေားတဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်မှာ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ကဆိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်နယ်ထရန့်က ဥပဒေကြောင်းအရ စိန်ခေါ်မှုတွေ အားထုတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကို သူက ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလဒ် အတည်ပြုလိုက်တာဟာ မစ္စတာဘိုင်ဒင် သမ္မတရာထူးရယူရေးအတွက် တရားဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရက်တစ်ကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ဟာ နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပတဲ့ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ရီပတ်ဘလီကန်ကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ဒေါ်နယ်ထရန့်ကို ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုမဲ (၃၀၆) မဲ၊ (၂၃၂) မဲနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ref : BBC Photo:…
ရန်ကုန်မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ထားဝယ်အမျိုးသားနေ့ အလံတင်ပွဲ ကျင်းပ
ဒီဇင်ဘာ ၁၅-၂၀၂၀ အေးချမ်းသူ(VOM) ရန်ကုန်တိုင်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းတောလမ်းရှိ မေဃဝတီကျောင်းတိုက်မှာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ထားဝယ်အမျိုးသားနေ့အလံတင်ပွဲ အခမ်းအနားကို ထားဝယ်လူမျိုးစုစည်းမှုကော်မတီက ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ထားဝယ်အမျိုးသားနေ့ကျင်းပရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထားဝယ်လူမျိုးစုကော်မတီ တိုင်းအတွင်းရေးမှူး ဦးအာကာဖြိုးက “အလံတင်အခမ်းအနားပြုလုပ်တာ ထားဝယ်မှာဆို သုံးကြိမ်ပေါ့၊ ရန်ကုန်မှာ ပထမဦးဆုံးပဲ သုံးကြိမ်မြောက်ရေးထားတာက အားလုံးကိုကိုယ်စားပြုပြီးရေးထားတာ”လို့ VOMကိုပြောပါတယ်။ ထားဝယ်လူမျိုးတွေအ​ပြင် ကတူး၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ မွန် လူမျိုးတွေပါ အလံတင်ပွဲအခမ်းအနားကို စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၃၀ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှ လာရောက်တဲ့ ပဒူးတိုင်းရင်းသား ကိုသန်းနိုင်က “အရင်က ထားဝယ်ဆို ကြားပဲကြားဖူးတာ မြင်တောင်မမြင်ဖူးဘူး၊ ကိုအာကာဖြိုးနဲ့ ခင်လို့လာတာ၊ ပဒူးနဲ့ထားဝယ်က အမျိုးသားရေးဖြတ်သန်းလာတာခြင်းအတူတူပဲလေ၊ ကျနော်တို့ ပဒူးအမျိုးသားနေ့လည်း သုံးကြိမ်ပဲရှိသေးတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ထားဝယ်အမျိုးသားနေ့ကို သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ရန်ကုန်မှာတော့ အခုနှစ်မှ စတင်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်​တယ်လိုြထားဝယ်လူမျိုးစုကော်မတီမှ တိုင်းအတွင်းရေးမှူး…
အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူ ၃ ဦးကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင် ၁ နှစ်ချ
ဒီဇင်ဘာ ၁၅-၂၀၂၀ အေးချမ်းသူ(VOM) အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ပုဒ်မ၅၀၅(ခ) နဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ မြတ်ဘုန်းမိုရ်၊ အောင်လင်း ၊ ဟိန်းဝေယံတို့ ၃ ဦးကို ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးက ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်းစိန်တရားရုံးမှာ တရားရင်ဆိုင်နေစဉ် ဟိန်းဝေယံ နဲ့ မြတ်ဘုန်းမိုရ် တို့အကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အမိန့်ချခံခဲ့ရတဲ့အပေါ် ကိုဟိန်းဝေယံက “ကျနော်က အဖမ်းခံတာပါ၊ အဖမ်းခံရတာမဟုတ်ပါဘူး။ မြဝတီလွှတ်တော်အမတ် ကိုသန့်ဇင်အောင်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အဖမ်းခံတာပါ၊ အမှန်တရားအတွက် ရင်ဆိုင်ဖို့ပြန်လာတာပါ”လို့ ပြောပါတယ်။ ဦးကိုနီအသတ်ခံရမှုမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ကြည်လင်းကို ရုံးထုတ်ချိန် ” ထမင်းဝအောင်စားထား “အမှတ်တံဆိပ်ပါ အင်္ကျီဝတ်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်းစိန်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနက နိူင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မ-၅၀၅(ခ)နဲ့ တရားလိုပြုလုပ်၍ တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂နှစ်နီးပါးကြာမြှင့်ပြီးနောက်ပိုင်း နိူင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူ ၄ ဦးဟာ တစ်လအတွင်းလာရောက်အဖမ်းခဲ့ကြတယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ မျိုးချစ်သွေးဓမ္မကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌ…
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ကစတဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါဟာ သူတို့နိုင်ငံမှာ အခါလည်သားဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပတ်နေဆဲပါ၊ မြန်မာပြည်ကို အမေရိကန်က ဗီဇာနဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိုဗစ်ကတော့ မတ်လ ၂၃ ဆိုရင် တနှစ်ပြည့်တော့မှာပါ။ ဒီကနေစခဲ့ ကိုဗစ်ကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ သေသူသေ၊ မွဲသူမွဲ၊ ဘဝပျက်သူပျက် နဲ့ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေဆဲပါ။ စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေ၊ စည်းကမ်းမလိုက်နာသူတွေ ၊ နိုင်ငံရေး ပယောဂတွေကြောင့် ကိုဗစ်ဟာ တအိမ်ဆင်းတအိမ်တက် လူတွေရဲ့အသက်တွေကို လည်ပတ်စားသောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရကလည်း ပြည်သူငြိုငြင်မှာစိုးရိမ်တာလား? စီမံခန့်ခွဲမှု မတတ်တာလား ? လူအင်အား ငွေအင်အား မတတ်နိုင်တာလား ? လားပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ မျက်မမြင်ပုဏ္ဏား ၆ ယောက် ဆင်စမ်းသလို ဖြစ်နေဆဲပါ။ တကျောင်း တဂါထာ တရွာတပုဒ်ဆန်းဆိုသလို တူညီတဲ့ စည်းကမ်း ဥပဒေမရှိဘဲ ထင်သလိုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်တာကို အားလုံးမြင်ရမှာပါ။ ကျမ္မာရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ဆေးကုတဲ့ဒေါက်တာဖြစ်ပေမယ့်…
နှာခေါင်းစည်း Mask ကောင်းမကောင်း ဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ
ဒီဇင်ဘာ ၁၅-၂၀၂၀ ဈေးကွက်ထဲက နှာခေါင်းစည်း Mask တွေကို အလွယ်မဝယ်သင့်ပါဘူး၊ ဘယ်လိုအရည်အသွေးတွေရှိသင့်တယ်၊ ဘယ်လိုဟာမှ ကာကွယ်မှုအပြည့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကို အလွယ်တကူသိဖို့ ဒါလေးခဏဖတ်ပေးပါ။ ပထမဆုံးပြင်ပ သွင်ပြင်လက္ခဏာအနေနဲ့ စစ်နိုင်တာက ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းတစ်ခုဟာ အလွှာ ၃ ခုပါရှိရပါမယ်။ ၁ – အပြင်ဘက်အလွှာဟာ ရေမဝင်နိုင်တဲ့၊ ရက်တလုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ (non-woven) အလွှာဖြစ်တဲ့ လူနဲ့ လူခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တဲ့ အစက်အမှုန်တွေကို မဝင်ရောက်ဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၂ – အလယ်အလွှာဟာ လေစစ် (Melt Blown)အလွှာဖြစ်တယ်၊ ရောဂါပိုးမွှားဖြတ်သန်း ဝင်/ထွက်တာကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ ၃ – အတွင်းဘက်အလွှာက ရေစုပ်ယူနိုင်တဲ့၊ ရက်လုပ်ထားတဲ့ (non-woven) အလွှာဖြစ်လို့ တပ်ဆင်သူရဲ့ ကိုယ်က ထွက်နေတဲ့ အရည်အစက်အမှုန်တွေကို စုပ်ယူပြီးတော့ ပြင်ပကိုမထွက်ဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၄ – နှာခေါင်းနေရာပေါ်မှာရှိတဲ့ သတ္ထုချောင်း(ကလစ်)က ဝတ်ဆင်သူနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နိုင်ဖို့…
ကျန်းမာရေး, နည်းပညာLeaveacomment